စဈ ၏ အနိဋ်ဌာရုံမြားကို ကနျ့သတျသညျ့ ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးမြား အကွောငျး အနှဈခြုပျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
February 2, 2019 March 21, 2019 kyaw zaw oo
[ Zawgyi Version First ] [ Unicode version below ]
[ Now read in Zawgyi version here ]
စစ် ၏ အနိဋ္ဌာရုံများကို ကန့်သတ်သည့် ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများ အကြောင်း အနှစ်ချုပ်
( – – ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများအကြောင်းကို လိုရင်းအနှစ် မပျက်ယွင်းစေပဲ အခြေခံပြည်သူအများ၏ နားသို့ ရောက်စေလို၍ ရေးသည့် စာ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းအပါအ၀င်ဖြစ်သော ဥပဒေအား နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (International Humanitarian Law) (သို့မဟုတ်) IHL ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည် – – )
၁။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလများ၌ပင်လျှင် လိုက်နာကြရမည့် ဥပဒေဆိုသည်မှာ ရှိနေပြီး၊ ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲကာလအတွင်း တရားလက်လွတ်ပြုမူခြင်းကို နိုင်ငံတကာဥပဒေများက ခွင့်မပြုပါ။ ထိုစစ်မက်အခြေအနေများအား ကန့်သတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ (laws of war) မှာ မဖြစ်မနေ တည်ရှိနေကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (International Humanitarian Law) မှာ စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ (laws of war) ဖြစ်ပါသည်။ IHL ဟု အတိုကောက် ခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
၂။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (IHL) ဆိုသည်မှာ လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်သော ပဋိပက္ခ (armed conflict) တစ်ခုခုအတွင်း ဘာတွေကို လုပ်လို့ရတယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ လုပ်လို့မရဘူး ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ အစုအဝေးကို ဆိုလိုသည်။ အများသူငါ ကြားဖူးနေကြသော ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းတို့ဆိုသည်မှာ ဤ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (IHL) ထဲတွင် အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
၃။ လက်ရှိ AA နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခသည်လည်း မြန်မာအစိုးရဘက်က AA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဟု ခေါ်ဝေါ်သည်ဖြစ်စေ မခေါ်ဝေါ်သည် ဖြစ်စေ၊ AA အား ရဲစခန်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် အမှုဖွင့်ထားသည် ဖြစ်စေ မဖွင့်ထားသည် ဖြစ်စေ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ (armed conflict) ဖြစ်သည့်အလျောက် ဤ IHL ထဲတွင် အကျုံးဝင်ပြီး၊ အရပ်သားများ နှင့်တကွ တိုက်ခိုက်နေခြင်း မဟုတ်သူများ အားလုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်များ ရကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်သော ပဋိပက္ခ (armed conflict) တစ်ခုခုအတွင်း ဘာတွေကို လုပ်လို့ရတယ်၊ ဘာတွေကိုတော့ လုပ်လို့မရဘူး ဟု IHL ၏ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကြမ်းဖျင်းနားလည်နိုင်သည်။
● စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ (laws of war) ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလများအတွင်း အသက်များကိုကယ်တင်နိုင်လျက် ဆင်းရဲဒုက္ခများကို လျော့ပါးစေလျက် လူသားမျိုးနွယ်အား တတ်အားသမျှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
● ထိုသို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ – IHL သည် အခြေအနေနှစ်ရပ်အား ထိန်းညှိမှုပြုလျက် စစ်ပွဲများကို မည်သို့မည်ပုံသာ တိုက်ခိုက်ကြသင့်သည် ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးသည်။ အဆိုပါ အခြေအနေနှစ်ရပ်မှာ – တစ်၊ ရန်သူ ဟု သတ်မှတ်ခံရသူများ နည်းပါးသွားစေခြင်း နှင့် ဒုက္ခဖြစ်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ခွင့်မရအောင် ကန့်သတ်ပစ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။
● စစ်ပွဲများကို မည်သို့မည်ပုံသာ တိုက်ခိုက်ရမည် ဟု သတ်မှတ်သော စည်းမျဉ်းများ၏ သက်ရောက်လွှမ်းခြုံမှုသည် နေရာတိုင်း လူမျိုးတိုင်း အခြေအနေတိုင်း လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတိုင်း တွင် သက်ရောက်စေရမည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ပြောရလျှင် universal ဖြစ်ရမည်။ (ငါတို့က သူတို့ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ထားလို့ ဘယ်လို သတ်ပစ်လိုက်တာ ဟူ၍မရှိစေရ။ ဘယ်လူမျိုးမို့လို့ ဆိုတာ မရှိစေရ။) IHL ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းများမှာ (မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င်) နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၆) နိုင်ငံက အတည်ပြုလက်ခံထားကြသော နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက် ဖြစ်သည်။ ဤသည်လောက် နိုင်ငံအရေအတွက်များများ အတည်ပြုလက်ခံသော ဤမျှနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရသော (ဆိုလိုသည်မှာ ဤမျှ အားရှိသော) နိုင်ငံတကာစာချုပ် ဟူ၍ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။
● စစ်ပွဲတစ်ပွဲပွဲတွင် ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသည့် မည်သူမဆို ဤ IHL အား လေးစားလိုက်နာ ကြရမည်။ အစိုးရတပ်များရော အစိုးရမဟုတ်သော လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကပါ လေးစားလိုက်နာကြရမည်။
● စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက ထိုသို့ကျူးလွန်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို ကျူးလွန်သူများက ခံစားကြရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ကြရမည်။ ယင်းတို့ကို နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရားရုံးများ နှင့် နိုင်ငံတကာတရားရုံးများက စုံစမ်းစစ်ဆေးလာရမည်။ ကျူးလွန်သူ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း တို့အား စစ်ဆေးစီရင်နိုင်သည်။
● လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းဆိုရာ၌ ကျူးလွန်သူတစ်ဦးချင်းက ကျူးလွန်သည့်အမှုအလိုက် စီရင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အထက်ကအမိန့်အရ လုပ်ရပါသည် ဟု ကင်းလွတ်ခွင့်မရနိုင်။ သို့မဟုတ်ပါက အထက်ကအမိန့်အရ လုပ်ရပါသည် ဟုဆိုလျက် နာဇီစစ်ရာဇ၀တ်ကောင်များ အားလုံး ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်ကာ ဟစ်တလာတစ်ဦးတည်းသာ အပြစ်ကျခံရန် ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။
၅။ စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ(laws of war) ၏ ဆိုလိုချက် အနှစ်ချုပ်မှာ – “လူတွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း မပြုရ။ အရပ်သား (civilian) များကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ။ မိမိ၏စစ်မက်လှုပ်ရှားမှုသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များအပေါ် သက်ရောက်ထိခိုက်မှု နည်းနိုင်သမျှ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရမည်။ မိမိ ထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်ထားသူများ(အကျဉ်းသားများ) ကို လူသားဆန်စွာ သနားညှာတာဆက်ဆံရမည်” ဟု အနှစ်ချုပ် ဆိုနိုင်ပါသည်။
၆။ စစ်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ(laws of war) က ဘာတွေ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးသနည်း။ ဤစစ်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများများသည် မည်သူများကို မည်ကဲ့သို့ အကာအကွယ်ပေးရန် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထား သနည်း။ ထို မေးခွန်း များကို ဖြေဆိုရမည်ဆိုပါက ဤစစ်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် –
(၁) တိုက်ခိုက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းမရှိသော သူများကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ (ဥပမာ – အရပ်သားများ၊ ဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်သူ ၀န်ထမ်းများ၊ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်သူများ . . . )
(၂) ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန် မတတ်နိုင်စွမ်းတော့သူများကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ (ဥပမာ – ဒဏ်ရာရ (နှစ်ဘက်)စစ်သည်များ၊ ဖမ်းဆီးခံရသူများ)
(၃) အရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် စစ်ရာဇ၀တ်မှု (war crime) ဖြစ်သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ကျူးလွန်သူ/ကျူးလွန်ရန် အမိန့်ပေးသူ တို့သည် စစ်ဆေး တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။)
(၄) အရပ်သားများသည် စစ်၏ ဘေးအန္တရာယ်များကနေ အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့် ရှိသည်သာမက ၎င်းတို့လိုအပ်နေသည်များကို လက်ခံရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည် ဟု အသိအမှတ်ပြုသည်။ (ဥပမာ- ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီရပိုင်ခွင့် ရှိသည်။) ၎င်းတို့ကိုသော်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏နေအိမ်များကိုသော်လည်းကောင်း ဘေးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေခြင်း အလျဉ်းမရှိလေရအောင်၊ ထို့အပြင် ရေအရင်းအမြစ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ မွေးမြူထားသည့် ကျွဲနွားကြက် အစရှိသည့် ၎င်းတို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးနည်းလမ်းများကို ပျက်စီးစေခြင်း တို့ လုံးဝမဖြစ်စေရလေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး သတိထား ဂရုပြုလုပ်ဆောင်ရမည် ဟု IHL က သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
(၅) နာဖျားမကျန်းဖြစ်နေသူများ နှင့် ဒဏ်ရာရနေသူများသည် စစ်မက်၏ မည်သည့် ဘက်သားပင် ဖြစ်စေကာမူ (ဆေးဝါး)ပြုစုစောင့်ရှောက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု အခိုင်အမာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည်။
(၆) လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်များ၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများ ကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ ဟု သတ်မှတ်သည်။
(၇) အကျဉ်းသားများအား နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း နှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနိမ့်ပါးစေအောင် နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်း များကို လုံးဝတားမြစ်သည်။
(၈) ချုပ်နှောင်အကျဉ်းချခံရသူများသည် အစားအစာနှင့် ရေ ကို လက်ခံရရှိစေရမည်။ ထို့အပြင် ၎င်း၏ ချစ်ခင်ရသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
(၉) မလိုလားအပ်သော ဆင်းရဲဒုက္ခများမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် မိမိတို့၏ လက်နက်များ နှင့် စစ်ဖက်နည်းစနစ်များကို ကန့်သတ်သုံးစွဲရမည်။ (ဥပမာ – သေချင်သူသေပလေစေရော့ ဆိုပြီး ဗုံးကြဲချင်သလို ကြဲခြင်းမျိုး မပြုရ ဟု ဆိုလိုသည်။ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှနေ၍ အရပ်သားမှန်းမသိ တိုက်ခိုက်ရေးသမားမှန်းမသိ မဲမဲမြင်ရာ လှမ်းပစ်ခြင်းမပြုရ ဟု ဆိုလိုသည်။)
(၁၀) လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ရာ အခင်းအကျင်းအတွင်း မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း နှင့် အခြားသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများကို လုံးဝ မဖြစ်ပွားစေရ ဟု ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
(၁၁) သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၊ သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်များ၊ အနုပညာလက်ရာများ နှင့် အခြားသော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖိုးတန်အမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
၇။ ရခိုင်ပြည်၏ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလများတွင် အရပ်သားပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့အား နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရ မည်သို့ အကာအကွယ်ကြောင်း မဖြစ်မနေသိထားကြရမည်သာမက၊ ထိုသို့အကာအကွယ်ပေးမှုများအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သည့် တိုက်ခိုက်သူများမှာ ဥပဒေကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့က သိရှိနေကြရမည့်အပြင်၊ ထိုသို့ ကျူးလွန်သည့် အဖြစ်အပျက်များကိုလည်း အချက်အလက် အပြည့်အစုံနှင့်တကွ မှတ်တမ်းပြုစုထားကြရန် လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်တမ်းနိုင်သည့်နေရာများသို့ တိုင်တမ်းကြရန် လိုအပ်ပါသည်။
၈။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်းဟု အများသိနေကြသည့် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (IHL) အကြောင်း အကျဉ်းမျှကို တိုက်ပွဲနယ်မြေများအတွင်းရှိ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ၊ ဆွေမျိုးစုခေါင်းဆောင်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူများ၊ စေတနာရှင်များ၊ ရခိုင်နိုင်ငံရေး နှင့် ပတ်သက်သူများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအနေဖြင့် လိုရင်းတိုရှင်းသိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် ဤစာစုကို ဘာသာပြန်ရေးသားပါသည်။ ဖေ့စ်ဘုတ် အစရှိသည့် လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် တတ်အားသမျှ ပြန်လည် မျှဝေကြရင်း တိုက်ပွဲကြားရောက်နေသည့် အခြေခံပြည်သူများသိရှိနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားပါသည်။
၉။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ သည်ဟိတ်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု တရားရုံး (ICC) မှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်ရက်စက်သည့် ရာဇ၀တ်မှု (crime against humanity) တို့အား စစ်ဆေး စွဲဆို ကြားနာ စီရင်ပါသည်။ တိုင်ကြားရန်ရှိသူ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတို့အနေဖြင့် အဆိုပါ ICC ၏ စွဲဆိုရေးမှူးရုံး (Office of The Prosecutor) သို့ တိုင်ကြားချက် ပေးပို့နိုင်ကြပါသည်။ ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်များ (communications) ဟု ခေါ်တွင်သည့် အဆိုပါ တိုင်ကြားချက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သို့မဟုတ် ပြင်သစ်ဘာသာ သို့မဟုတ် ICC ရုံးတော်၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား တစ်ခုခုဖြစ်သည့် အာရဗီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ စပိန် တမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားလျက် အောက်ပါ လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပါက စွဲဆိုရေးမှူးရုံးသည် ရောက်လာသည့် ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်၏ အကျုံးဝင်မှု၊ အမှုလေးနက်မှု၊ အချက်အလက်ခိုင်မာမှုတို့ကို ကနဦးဆန်းစစ်မှု (initial review) ပြုလုပ်လျက် အမှုအား ဆက်လက်ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်ရန် သင့်မသင့်ကို သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ပြောကြားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို OTC သို့ ပေးပို့ရန် နည်းလမ်း သုံးသွယ်ရှိပါသည်။
စာတိုက်မှ ပို့ရန် လိပ်စာ –
အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့ရန် – otp.informationdesk@icc-cpi.int
ဖက်စ် (fax) ဖြင့် ပို့ရန် – +31 70 515 8555
၁၀။ သတိမူရန်တစ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျနီဗာကွန်ဗန်းရှင်း ကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူထားသည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ (a state party) ဖြစ်သော်ငြားလည်း နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှု တရားရုံး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိသေးပါ။ သို့သော်ငြားလည်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက်သို့ မျက်စိလည်လမ်းမှားရောက်သွားသော မြန်မာတပ်သား တစ်ဦးမှာ တိုင်ကြားခံရချက်များနှင့် ပတ်သက်နေသည် ဟု ဆိုကာ ၎င်းအား ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ICC သို့ လွှဲပြောင်း ပေးရန် စီစဉ်နေသည်။
၁၁။ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (IHL) အား မူရင်းအတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ရန် နှင့် လိုအပ်ပါက download ချနိုင်စေရန်အလို့ငှာ Kyaw Zaw Oo’s Blog တွင် ပုံနှိပ်ထားသည့် ဤဆောင်းပါးစာစုအဆုံးတွင် link များ တင်ပေးထားပါသည်။
စစ်တွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂) ရက်
သြစတေးလျ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ website ၏ “What is International Humanitarian Law?” ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန် ဖြည့်စွက်ရေးသားပါသည်။
နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ (IHL) အား အပိုင်းအလိုက် အောက်ပါ link များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ download ချနိုင်ပါသည်။
“First Geneva Convention, 1949”| IHL Datasase |
“Second Geneva Convention, 1949”| IHL Datasase |
“Third Geneva Convention, 1949”| IHL Datasase |
“Fourth Geneva Convention, 1949”| IHL Datasase |
“Protocol I additional to the Geneva Conventions, 1977”| IHL Datasase |
“Protocol II additional to the Geneva Conventions, 1977”| IHL Datasase |
“Protocol III additional to the Geneva Conventions, 2005”| IHL Datasase |
[ Now read in Unicode version here ]
( – – ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးမြားအကွောငျးကို လိုရငျးအနှဈ မပကျြယှငျးစပေဲ အခွခေံပွညျသူအမြား၏ နားသို့ ရောကျစလေို၍ ရေးသညျ့ စာ ဖွဈပါသညျ။ ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးအပါအဝငျဖွဈသော ဥပဒအေား နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (International Humanitarian Law) (သို့မဟုတျ) IHL ဟု ချေါဝျေါကွပါသညျ – – )
၁။ စဈမကျဖွဈပှားနသေညျ့ကာလမြား၌ပငျလြှငျ လိုကျနာကွရမညျ့ ဥပဒဆေိုသညျမှာ ရှိနပွေီး၊ ဥပဒနှေငျ့အညီသာ ဆောငျရှကျကွရမညျ ဖွဈသညျ။ စဈပှဲကာလအတှငျး တရားလကျလှတျပွုမူခွငျးကို နိုငျငံတကာဥပဒမြေားက ခှငျ့မပွုပါ။ ထိုစဈမကျအခွအေနမြေားအား ကနျ့သတျပွဋ်ဌာနျးသညျ့ စဈပှဲဆိုငျရာဥပဒမြေား (laws of war) မှာ မဖွဈမနေ တညျရှိနကွေပါသညျ။ နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (International Humanitarian Law) မှာ စဈပှဲဆိုငျရာဥပဒမြေား (laws of war) ဖွဈပါသညျ။ IHL ဟု အတိုကောကျ ချေါဝျေါကွပါသညျ။
၂။ နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (IHL) ဆိုသညျမှာ လကျနကျစှဲကိုငျ တိုကျခိုကျသော ပဋိပက်ခ (armed conflict) တဈခုခုအတှငျး ဘာတှကေို လုပျလို့ရတယျ၊ ဘာတှကေိုတော့ လုပျလို့မရဘူး ဟု သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးထားသော နိုငျငံတကာ ဥပဒေ အစုအဝေးကို ဆိုလိုသညျ။ အမြားသူငါ ကွားဖူးနကွေသော ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးတို့ဆိုသညျမှာ ဤ နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (IHL) ထဲတှငျ အပါအဝငျ ဖွဈသညျ။
၃။ လကျရှိ AA နှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့ ဖွဈပှားနသေော လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခသညျလညျး မွနျမာအစိုးရဘကျက AA ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့ဟု ချေါဝျေါသညျဖွဈစေ မချေါဝျေါသညျ ဖွဈစေ၊ AA အား ရဲစခနျးတှငျ အကွမျးဖကျမှုနှငျ့ အမှုဖှငျ့ထားသညျ ဖွဈစေ မဖှငျ့ထားသညျ ဖွဈစေ၊ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ (armed conflict) ဖွဈသညျ့အလြောကျ ဤ IHL ထဲတှငျ အကြုံးဝငျပွီး၊ အရပျသားမြား နှငျ့တကှ တိုကျခိုကျနခွေငျး မဟုတျသူမြား အားလုံးမှာ သကျဆိုငျရာကငျးလှတျခှငျ့မြား ရကွရမညျ ဖွဈပါသညျ။
၄။ လကျနကျစှဲကိုငျ တိုကျခိုကျသော ပဋိပက်ခ (armed conflict) တဈခုခုအတှငျး ဘာတှကေို လုပျလို့ရတယျ၊ ဘာတှကေိုတော့ လုပျလို့မရဘူး ဟု IHL ၏ သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားကို အောကျပါအတိုငျး အကွမျးဖငျြးနားလညျနိုငျသညျ။
စဈပှဲဆိုငျရာဥပဒမြေား (laws of war) ၏ အဓိက ရညျရှယျခကျြမှာ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ ဖွဈပှားနစေဉျ ကာလမြားအတှငျး အသကျမြားကိုကယျတငျနိုငျလကျြ ဆငျးရဲဒုက်ခမြားကို လြော့ပါးစလေကျြ လူသားမြိုးနှယျအား တတျအားသမြှ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျစရေနျ ရညျရှယျသညျ။
ထိုသို့ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျရနျ အလို့ငှာ – IHL သညျ အခွအေနနှေဈရပျအား ထိနျးညှိမှုပွုလကျြ စဈပှဲမြားကို မညျသို့မညျပုံသာ တိုကျခိုကျကွသငျ့သညျ ဟု သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးပေးသညျ။ အဆိုပါ အခွအေနနှေဈရပျမှာ – တဈ၊ ရနျသူ ဟု သတျမှတျခံရသူမြား နညျးပါးသှားစခွေငျး နှငျ့ ဒုက်ခဖွဈစမေညျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားကို လုပျခှငျ့မရအောငျ ကနျ့သတျပဈခွငျး တို့ ဖွဈကွသညျ။
စဈပှဲမြားကို မညျသို့မညျပုံသာ တိုကျခိုကျရမညျ ဟု သတျမှတျသော စညျးမဉျြးမြား၏ သကျရောကျလှမျးခွုံမှုသညျ နရောတိုငျး လူမြိုးတိုငျး အခွအေနတေိုငျး လကျနကျကိုငျတိုကျခိုကျမှုတိုငျး တှငျ သကျရောကျစရေမညျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားဖွငျ့ ပွောရလြှငျ universal ဖွဈရမညျ။ (ငါတို့က သူတို့ကို ဘယျလို သတျမှတျထားလို့ ဘယျလို သတျပဈလိုကျတာ ဟူ၍မရှိစရေ။ ဘယျလူမြိုးမို့လို့ ဆိုတာ မရှိစရေ။) IHL ၏ အဓိကအစိတျအပိုငျးဖွဈသော ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးမြားမှာ (မွနျမာနိုငျငံ အပါအဝငျ) နိုငျငံပေါငျး (၁၉၆) နိုငျငံက အတညျပွုလကျခံထားကွသော နိုငျငံတကာ သဘောတူညီခကျြ ဖွဈသညျ။ ဤသညျလောကျ နိုငျငံအရအေတှကျမြားမြား အတညျပွုလကျခံသော ဤမြှနိုငျငံတကာထောကျခံမှုရသော (ဆိုလိုသညျမှာ ဤမြှ အားရှိသော) နိုငျငံတကာစာခြုပျ ဟူ၍ မရှိသလောကျပငျ ဖွဈသညျ။
စဈပှဲတဈပှဲပှဲတှငျ ပါဝငျတိုကျခိုကျနသေညျ့ မညျသူမဆို ဤ IHL အား လေးစားလိုကျနာ ကွရမညျ။ အစိုးရတပျမြားရော အစိုးရမဟုတျသော လကျနကျကိုငျအုပျစုမြားကပါ လေးစားလိုကျနာကွရမညျ။
စဈပှဲတိုကျခိုကျမှုဆိုငျရာ စညျးမဉျြးမြားကို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျပါက ထိုသို့ကြူးလှနျခွငျး၏ အကြိုးဆကျမြားကို ကြူးလှနျသူမြားက ခံစားကွရမညျ ဖွဈသညျ။ စဈရာဇဝတျမှုမြားကို မှတျတမျးတငျကွရမညျ။ ယငျးတို့ကို နိုငျငံဆိုငျရာ တရားရုံးမြား နှငျ့ နိုငျငံတကာတရားရုံးမြားက စုံစမျးစဈဆေးလာရမညျ။ ကြူးလှနျသူ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးခငျြး တို့အား စဈဆေးစီရငျနိုငျသညျ။
လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးခငျြးဆိုရာ၌ ကြူးလှနျသူတဈဦးခငျြးက ကြူးလှနျသညျ့အမှုအလိုကျ စီရငျခွငျးကို ဆိုလိုသညျ။ အထကျကအမိနျ့အရ လုပျရပါသညျ ဟု ကငျးလှတျခှငျ့မရနိုငျ။ သို့မဟုတျပါက အထကျကအမိနျ့အရ လုပျရပါသညျ ဟုဆိုလကျြ နာဇီစဈရာဇဝတျကောငျမြား အားလုံး ကှငျးလုံးကြှတျ လှတျမွောကျကာ ဟဈတလာတဈဦးတညျးသာ အပွဈကခြံရနျ ဖွဈသှားပလေိမျ့မညျ။
၅။ စဈပှဲဆိုငျရာဥပဒမြေား(laws of war) ၏ ဆိုလိုခကျြ အနှဈခြုပျမှာ – “လူတှကေို နှိပျစကျညှဉျးပနျးခွငျး မပွုရ။ အရပျသား (civilian) မြားကို တိုကျခိုကျခွငျးမပွုရ။ မိမိ၏စဈမကျလှုပျရှားမှုသညျ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ ကလေးငယျမြားအပျေါ သကျရောကျထိခိုကျမှု နညျးနိုငျသမြှ အနညျးဆုံးဖွဈအောငျ ကနျ့သတျထိနျးခြုပျရမညျ။ မိမိ ထိနျးသိမျးခြုပျနှောငျထားသူမြား(အကဉျြးသားမြား) ကို လူသားဆနျစှာ သနားညှာတာဆကျဆံရမညျ” ဟု အနှဈခြုပျ ဆိုနိုငျပါသညျ။
၆။ စဈပှဲဆိုငျရာဥပဒမြေား(laws of war) က ဘာတှေ ရပျတညျဆောငျရှကျပေးသနညျး။ ဤစဈပှဲဆိုငျရာ ဥပဒမြေားမြားသညျ မညျသူမြားကို မညျကဲ့သို့ အကာအကှယျပေးရနျ သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးထား သနညျး။ ထို မေးခှနျး မြားကို ဖွဆေိုရမညျဆိုပါက ဤစဈပှဲဆိုငျရာ ဥပဒမြေားသညျ –
(၁) တိုကျခိုကျခွငျးကို လုပျဆောငျနခွေငျးမရှိသော သူမြားကို အကာအကှယျပေးသညျ။ (ဥပမာ – အရပျသားမြား၊ ဆေးကုသမှုဆောငျရှကျသူ ဝနျထမျးမြား၊ ကူညီကယျဆယျရေးလုပျဆောငျသူမြား . . . )
(၂) ဆကျလကျတိုကျခိုကျရနျ မတတျနိုငျစှမျးတော့သူမြားကို အကာအကှယျပေးသညျ။ (ဥပမာ – ဒဏျရာရ (နှဈဘကျ)စဈသညျမြား၊ ဖမျးဆီးခံရသူမြား)
(၃) အရပျသားမြားကို ပဈမှတျထားတိုကျခိုကျခွငျးကို တားမွဈသညျ။ ထိုသို့လုပျဆောငျခွငျးသညျ စဈရာဇဝတျမှု (war crime) ဖွဈသညျ။ (ဆိုလိုသညျမှာ ကြူးလှနျသူ/ကြူးလှနျရနျ အမိနျ့ပေးသူ တို့သညျ စဈဆေး တရားစီရငျခွငျးခံရမညျ။)
(၄) အရပျသားမြားသညျ စဈ၏ ဘေးအန်တရာယျမြားကနေ အကာအကှယျရပိုငျခှငျ့ ရှိသညျသာမက ၎င်းငျးတို့လိုအပျနသေညျမြားကို လကျခံရယူပိုငျခှငျ့ရှိသညျ ဟု အသိအမှတျပွုသညျ။ (ဥပမာ- ကယျဆယျရေး အကူအညီရပိုငျခှငျ့ ရှိသညျ။) ၎င်းငျးတို့ကိုသျောလညျးကောငျး ၎င်းငျးတို့၏နအေိမျမြားကိုသျောလညျးကောငျး ဘေးတဈစုံတဈရာ ဖွဈစခွေငျး အလဉျြးမရှိလရေအောငျ၊ ထို့အပွငျ ရအေရငျးအမွဈ၊ ကောကျပဲသီးနှံ၊ မှေးမွူထားသညျ့ ကြှဲနှားကွကျ အစရှိသညျ့ ၎င်းငျးတို့ အသကျရှငျရပျတညျရေးနညျးလမျးမြားကို ပကျြစီးစခွေငျး တို့ လုံးဝမဖွဈစရေလအေောငျ အတတျနိုငျဆုံး သတိထား ဂရုပွုလုပျဆောငျရမညျ ဟု IHL က သတျမှတျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
(၅) နာဖြားမကနျြးဖွဈနသေူမြား နှငျ့ ဒဏျရာရနသေူမြားသညျ စဈမကျ၏ မညျသညျ့ ဘကျသားပငျ ဖွဈစကောမူ (ဆေးဝါး)ပွုစုစောငျ့ရှောကျခံပိုငျခှငျ့ ရှိသညျဟု အခိုငျအမာ သတျမှတျပွဋ်ဌာနျးသညျ။
(၆) လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ လုပျငနျးမြားလုပျဆောငျနသေညျ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာလုပျသားမြား၊ ဆေးဘကျဆိုငျရာ ယာဉျမြား၊ ဆေးရုံဆေးခနျးမြား ကို တိုကျခိုကျခွငျးမပွုရ ဟု သတျမှတျသညျ။
(၇) အကဉျြးသားမြားအား နှိပျစကျညှဉျးပနျးခွငျး နှငျ့ လူ့ဂုဏျသိက်ခာနိမျ့ပါးစအေောငျ နှိမျ့ခဆြကျဆံခွငျး မြားကို လုံးဝတားမွဈသညျ။
(၈) ခြုပျနှောငျအကဉျြးခခြံရသူမြားသညျ အစားအစာနှငျ့ ရေ ကို လကျခံရရှိစရေမညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျး၏ ခဈြခငျရသူမြားနှငျ့ ဆကျသှယျပိုငျခှငျ့ ရှိရမညျ။
(၉) မလိုလားအပျသော ဆငျးရဲဒုက်ခမြားမဖွဈပျေါစရေေးအတှကျ မိမိတို့၏ လကျနကျမြား နှငျ့ စဈဖကျနညျးစနဈမြားကို ကနျ့သတျသုံးစှဲရမညျ။ (ဥပမာ – သခေငျြသူသပေလစေရေော့ ဆိုပွီး ဗုံးကွဲခငျြသလို ကွဲခွငျးမြိုး မပွုရ ဟု ဆိုလိုသညျ။ ရဟတျယာဉျပျေါမှနေ၍ အရပျသားမှနျးမသိ တိုကျခိုကျရေးသမားမှနျးမသိ မဲမဲမွငျရာ လှမျးပဈခွငျးမပွုရ ဟု ဆိုလိုသညျ။)
(၁၀) လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈရာ အခငျးအကငျြးအတှငျး မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး နှငျ့ အခွားသော လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုမြားကို လုံးဝ မဖွဈပှားစရေ ဟု ပိတျပငျတားမွဈသညျ။
(၁၁) သမိုငျးဝငျအဆောကျအအုံမြား၊ သမိုငျးဝငျအထိမျးအမှတျမြား၊ အနုပညာလကျရာမြား နှငျ့ အခွားသော ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ အဖိုးတနျအမှအေနှဈမြားကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
၇။ ရခိုငျပွညျ၏ တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားနသေညျ့ကာလမြားတှငျ အရပျသားပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့အား နိုငျငံတကာဥပဒမြေားအရ မညျသို့ အကာအကှယျကွောငျး မဖွဈမနသေိထားကွရမညျသာမက၊ ထိုသို့အကာအကှယျပေးမှုမြားအား ဖောကျဖကျြကြူးလှနျသညျ့ တိုကျခိုကျသူမြားမှာ ဥပဒကေို ကြူးလှနျခွငျးဖွဈကွောငျး မိမိတို့က သိရှိနကွေရမညျ့အပွငျ၊ ထိုသို့ ကြူးလှနျသညျ့ အဖွဈအပကျြမြားကိုလညျး အခကျြအလကျ အပွညျ့အစုံနှငျ့တကှ မှတျတမျးပွုစုထားကွရနျ လိုအပျပါသညျ။ တိုငျတမျးနိုငျသညျ့နရောမြားသို့ တိုငျတမျးကွရနျ လိုအပျပါသညျ။
၈။ သို့ဖွဈပါ၍ ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျးဟု အမြားသိနကွေသညျ့ နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (IHL) အကွောငျး အကဉျြးမြှကို တိုကျပှဲနယျမွမြေားအတှငျးရှိ ကြေးရှာခေါငျးဆောငျမြား၊ ဆှမြေိုးစုခေါငျးဆောငျမြား၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျး လှုပျရှားဆောငျရှကျသူမြား၊ စတေနာရှငျမြား၊ ရခိုငျနိုငျငံရေး နှငျ့ ပတျသကျသူမြား၊ တကျကွှလှုပျရှားသူမြားအနဖွေငျ့ လိုရငျးတိုရှငျးသိနိုငျစရေနျ ရညျရှယျလကျြ ဤစာစုကို ဘာသာပွနျရေးသားပါသညျ။ ဖစျေ့ဘုတျ အစရှိသညျ့ လူမှုကှနျရကျမြားမှတဈဆငျ့ တတျအားသမြှ ပွနျလညျ မြှဝကွေရငျး တိုကျပှဲကွားရောကျနသေညျ့ အခွခေံပွညျသူမြားသိရှိနိုငျကွစရေနျ ရညျရှယျရေးသားပါသညျ။
၉။ နယျသာလနျနိုငျငံ သညျဟိတျမွို့တှငျ အခွစေိုကျသညျ့ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမှု တရားရုံး (ICC) မှာ စဈရာဇဝတျမှုမြား၊ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုမြား၊ လူသားမြိုးနှယျအပျေါကြူးလှနျရကျစကျသညျ့ ရာဇဝတျမှု (crime against humanity) တို့အား စဈဆေး စှဲဆို ကွားနာ စီရငျပါသညျ။ တိုငျကွားရနျရှိသူ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးတဈယောကျ သို့မဟုတျ အဖှဲ့အစညျးတဈခုခုတို့အနဖွေငျ့ အဆိုပါ ICC ၏ စှဲဆိုရေးမှူးရုံး (Office of The Prosecutor) သို့ တိုငျကွားခကျြ ပေးပို့နိုငျကွပါသညျ။ ဆကျသှယျပွောကွားခကျြမြား (communications) ဟု ချေါတှငျသညျ့ အဆိုပါ တိုငျကွားခကျြမြားကို အင်ျဂလိပျဘာသာ သို့မဟုတျ ပွငျသဈဘာသာ သို့မဟုတျ ICC ရုံးတျော၏ ရုံးသုံးဘာသာစကား တဈခုခုဖွဈသညျ့ အာရဗီ၊ တရုတျ၊ ရုရှား၊ စပိနျ တမြိုးမြိုးဖွငျ့ ရေးသားလကျြ အောကျပါ လိပျစာသို့ ပေးပို့ပါက စှဲဆိုရေးမှူးရုံးသညျ ရောကျလာသညျ့ ဆကျသှယျပွောကွားခကျြ၏ အကြုံးဝငျမှု၊ အမှုလေးနကျမှု၊ အခကျြအလကျခိုငျမာမှုတို့ကို ကနဦးဆနျးစဈမှု (initial review) ပွုလုပျလကျြ အမှုအား ဆကျလကျကိုငျတှယျ လုပျဆောငျရနျ သငျ့မသငျ့ကို သုံးသပျဆုံးဖွတျမညျ ဖွဈပါသညျ။
ဆကျသှယျပွောကွားခကျြ တဈရပျရပျကို OTC သို့ ပေးပို့ရနျ နညျးလမျး သုံးသှယျရှိပါသညျ။
စာတိုကျမှ ပို့ရနျ လိပျစာ –
အီးမေးလျဖွငျ့ ပို့ရနျ – otp.informationdesk@icc-cpi.int
ဖကျဈ (fax) ဖွငျ့ ပို့ရနျ – +31 70 515 8555
၁၀။ သတိမူရနျတဈခကျြမှာ မွနျမာနိုငျငံသညျ ဂနြီဗာကှနျဗနျးရှငျး ကို လိုကျနာလုပျဆောငျရနျ သဘောတူထားသညျ့နိုငျငံတဈနိုငျငံ (a state party) ဖွဈသျောငွားလညျး နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမှု တရားရုံး ဆိုငျရာ နိုငျငံတကာ သဘောတူညီခကျြကို လကျမှတျရေးထိုးထားခွငျး မရှိသေးပါ။ သို့သျောငွားလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျပိုငျးအတှငျး ဘင်ျဂလာဒရှေျ့နိုငျငံဖကျသို့ မကျြစိလညျလမျးမှားရောကျသှားသော မွနျမာတပျသား တဈဦးမှာ တိုငျကွားခံရခကျြမြားနှငျ့ ပတျသကျနသေညျ ဟု ဆိုကာ ၎င်းငျးအား ဘင်ျဂလာဒရှေျ့နိုငျငံက ICC သို့ လှဲပွောငျး ပေးရနျ စီစဉျနသေညျ။
၁၁။ နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (IHL) အား မူရငျးအတိုငျး ဖတျရှုနိုငျရနျ နှငျ့ လိုအပျပါက download ခနြိုငျစရေနျအလို့ငှာ Kyaw Zaw Oo’s Blog တှငျ ပုံနှိပျထားသညျ့ ဤဆောငျးပါးစာစုအဆုံးတှငျ link မြား တငျပေးထားပါသညျ။
စဈတှမွေို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၂)
၂၀၁၉ ဖဖေျောဝါရီလ (၂) ရကျ
သွစတေးလြ ကွကျခွနေီအဖှဲ့ website ၏ “What is International Humanitarian Law?” ဆောငျးပါးကို ဘာသာပွနျ ဖွညျ့စှကျရေးသားပါသညျ။
နိုငျငံတကာ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ (IHL) အား အပိုငျးအလိုကျ အောကျပါ link မြားတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။ download ခနြိုငျပါသညျ။
Previous ဦးအောငျဆနျးအား အမှဆေကျခံသူ
Next ဒုက်ခသညျ နှဈရာခနျ့ ခငျြးပွညျနယျ-ဘင်ျဂလာနယျခွားမှာ အကူအညီမဲ့ ခိုလှုံနကွေရ
Nandar Chann says: